Yiyiphi indima kaCeba kaMasipala kurhulumente wengingqi? ?
Oomasipala beeNgingqi kunye noomasipala bahlukaniswe ngamawadi. Ikhansela lewadi limela iwadi ekhethekileyo kwibhunga likamasipala kwaye likhethwa kukhetho lonyulo lwasekhaya ngethuba lokugqibela lenkqubo yeposi. Ikhansela elimeleyo leNgxowa-mali limele iqela lezopolitiko kumabhunga kamasipala kwaye lonyulwa ngeenkqubo zokumelwa ngokulinganayo.
1. ukumela abantu kumasipala kwaye basebenzisane namanye amabhunga eyona nto inomdla kuluntu.
2. Abacebisi kufuneka bathethe iimfuno zoluntu kumabhunga kamasipala kunye neenkqubo zebhunga kuluntu.
3. Abakhansela kufuneka balungiselele baze baye kwiintlanganiso ngaphandle kokuba bekhefu.
5. Abakhansela kufuneka bajonge ukusebenza komasipala; ukuphakamisa imiba yenkxalabo kunye namaziko achaphazelekayo kunye nokunika ingxelo malunga noomasipala ukusebenza.
6. Abakhansela kufuneka balandele ikhowudi yokuziphatha ebandakanya ukuchazela ulwazi kubantu abanokuzuza ngokungafanelekileyo kuyo.
Abaceba bamagosa banyulwa ngokuthe ngqo ngabantu kwiiwadi zabo. kwaye usihlalo kwiikomiti zewadi. Ibhunga likamasipala linokuphendula ngoku:
1. Ukhetho – ukuvota komnye umntu okanye iqela elihlukile
2. Iintlanganiso zezopolitiko zeqela
3. Iintlanganiso zokuthatha inxaxheba
4. Uqha ga mshelwano
5. Ukuthotyelwa kwekhowudi yokuziphatha.
6. Iincwadi, izikhalazo kunye neendaba
7. Ukubhikisha okunokuthula